ရေးသားသူ may16 at Saturday, December 26, 2009
Welcome December 26, 2009 at 5:52 PM
မှတ်သားစရာကောင်းတဲ့ ပုံပြင်လေး လာဖတ်သွားပါတယ်။
ဇွန်မ December 26, 2009 at 6:43 PM
အနီးကပ်ရန်သူ ဖြစ်မဲ့အစား အနီးကပ် ပံ့ပိုးသူသာ ဖြစ်ချင်ပါတယ် အမရယ် (ဒီဇာတ်လမ်းလေး ဖော်ညွှန်းတာ အမျိုးသမီးတိုင်းတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူးနော်)
နွေဆူးလင်္ကာ December 26, 2009 at 6:53 PM
အော် အနီးကပ်ဆုံးရန်သူ ... ရှာလည်းကျွေးရဦးမယ် .. တင်လည်း တောင်းရဦးမယ် .. ဒါများ ငါ့နှယ် ဘာကြောင့် မိန်းမလိုချင်ပါလိမ့် ။
မိန်းမယူတာ မကောင်းကြောင်း ပုံပြင်ထဲမှာ ဖတ်ရလို့ ခု ကျနော် ဘယ်ပုံပြင်မှ မဖတ်တော့ဘူး ဟီးဟီး
ဂျပန်ကောင်လေး December 27, 2009 at 7:34 AM
း)).. အဲဒီ ရန်သူကိုပဲ တသက်လုံး ချစ်ရဦးမှာ.. ဟီး
အနမ်း December 27, 2009 at 9:42 PM
ပုံပြင်လေးက မှတ်သားစရာလေးပါ။ ခုလိုမျှဝေတာကျေးဇူး ညီမရေ။ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေ။
ညရဲ့ကောင်းကင် December 27, 2009 at 11:24 PM
ပန်ပန်ကတော့ လုပ်ပြီ ..ချစ်ချင်သေးတယ်ပေါ့..အဟားဟား
ဗန်းမော်ဆရာတော် ပုံပြင်တွေက တကယ်အနှစ်သာရ ရှိပါတယ်..
မိုးစက်အိမ် December 28, 2009 at 3:24 AM
အနီးကပ် ရန်သူဆိုတာကတော့ ကဗျာ
မဆန်ဘူးနော် မကြီး :D :P
မေသစ္စာမောင် December 28, 2009 at 3:28 PM
အဖော်မွန်ကောင်းပီသခဲ့ရင် အနီးကပ် ရန်သူတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူးနော် ;)
အနီးကပ် တိုင်ပင်ဖော်တိုင်ပင်ဖက်ပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဇော်သိင်္ခ December 29, 2009 at 2:14 PM
အဲဒီလို အနီးကပ် ရန်သူတော့ မလိုချင်ဘူးဗျာ.. အနီးကပ်. တိုင်ပင်ဖော်လေး ပဲ လိုချင်တယ်.
မေကျော် December 30, 2009 at 2:03 PM
အဲလောက်ကြီးတော့ မညွှန်းပါနဲ့အမရယ်....း)
It's absolutely right,because that's my experience.
မောင်ငရ် January 18, 2010 at 8:16 AM